Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း)
Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ဝက်ရူးပြန်ရောဂါအတက်ရောဂါကို ကုသရာမှာ အခြားဆေးတွေနဲ့တွဲပြီး သို့မဟုတ် သူ့သီးသန့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ စိတ်ကျစိတ်ကြွရောဂါမှာတွေ့ရတဲ့ ခံစားချက်ပြင်းထန်လွန်းခြင်းကို ကာကွုယ်ဖို့သုံးပါတယ်။ အတက်ရောဂါဆန့်ကျင်ဆေးအနေနဲ့ သိထားပါတယ်။ ဦးနှောက်အတွင်း သဘာဝပစ္စည်းတွေပမာ ဏ ကိုပြန်ထိန်းညှိခြင်းပေးခြင်းဖြင့် အကူအညီပေးပါတယ်။
Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အစာနဲ့တွဲပြီး သို့ အစာမပါဘဲ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝါးစားရင်ခါးတဲ့အရသာရနိုင်တာကြောင့် မဝါးဘဲဆေးပြားတစ်ပြားလုံးကို မျိုချလိုက်ပါ။
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆေးပမာဏကိုတိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆေးပမာဏကိုရဖို့ နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးအပြည့်အဝရနိုင်ဖို့ သီတင်းပတ်တွေလတွေအများကြီး ကြာနိုင်ပါတယ်။ အကျိုးကျေးဇူးအကောင်းဆုံးရရှိေအောင် ပုံမှန်မှီဝဲသင့်ပါတယ်။ မှတ်မိဖို့အတွက်ဆိုရင် တစ်နေ့စီမှာ အချိန်တူတူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲ ဆေးကိုမရပ်လိုက်သင့်ပါဘူး။ ဆေးကိုရုတ်တရက်ကြီးရပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ တချို့အခြေအနေတွေဟာ ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆေးပမာဏကိုလျှော့သွားဖို့လိုပါတယ်။ ရပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း ဆရာဝန်နဲ့မတိုင်ပင်ဘဲ ပြန်မသုံးသင့်ပါဘူး။
အခြေအနေမသက်သာဘူးဆိုရင် သို့ ပိုဆိုးလာတယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။
Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
lamotrigine သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကိုယ်ဝန်တားဆေးကဲ့သို့သော အမျိုးသမီးဟော်မုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆေးတွေ သုံးနေတယ်ဆိုရင် ( သန္ဓေတားဆေးသောက်ဆေးပုံစံ၊ patches, rings၊ ထိုးဆေး၊ သားအိမ်အတွင်းပစ္စည်းထည့်ခြင်း) ။ lamotrigineအသုံးပြုနေစဉ်မှာ ဒီဆေးမည့်သည့်အမျိုးအစားမဆို စအသုံးပြုတော့မှာဖြစ်ဖြစ် ရပ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ် သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။ မိန်းမဟော်မုန်းဆိုင်ရာဆေ်းတွေမှီဝဲနေတယ်ဆိုရင် ရာသီသွေးဆင်းချိန်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ သွေးထွက်တာမျိုးတွေကို သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်တွင်းသဘာဝရှိနေသောအရာများကို ပြန်တိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများ ( ခန္ဓါကိုယ်က သူ့အဂါၤအစိတ်အပိုင်းကို ပြန်တိုက်ခြင်းေကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အခြေအနေများ) အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်း ( ခန္ဓါကိုယ်က အမျိုးမျိုးသောအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် အမျိုးမျိုးသောလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေခြင်း) ၊ သွေးဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်းရောဂါများ
ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ( သွားဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ လုပ်နေမယ်ဆိုရင် lamotrigine ဆေးအသုံးပြုနေကြောင်း သင့်ဆရာဝန် သို့ သွားဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတည့်မှုများ ( အဖုအပိမ့်ထခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ ယားခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်တင်းကျပ်ခြင်း၊ ပါးစပ်မျက်နှာနှုတ်ခမ်းလျှာရောင်ခြင်း၊ အသံကွဲအက်အက်ဖြစ်ခြင်း)
ဓမ္မတာကျော်သွားခြင်း သို့ အခြားဓမ္မတာဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ
ခြေသလုံးကြွက်သားများ နာခြင်း အထိမခံနိုင်အောင်နာခြင်း
ဆီးသွားရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ နာခြင်း
ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ နာတာရှည်လည်ချောင်းနာခြင်း
ခံစားချက်များဆိုးရွားခြင်း ( စိုးရိမ်ခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်း၊ ကနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ခြင်း၊ ထိန်းမရအောင်လန့်ခြင်း၊ အမူအကျငိများပြောင်းလဲခြင်း)
အရေပြားနီခြင်း၊ ပေါက်ပြဲခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ကွာကျခြင်း
ပြင်းပြင်းထန်ထန်မူးခြင်း ၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း
ပါးစပ်ထဲ မျက်လုံးတစ်ဝိုက် အနာများပေါက်ခြင်း
အဆုံးစီရင်ချင်သည့်အတွေးများ သို့ ကြိုးပမ်းမှုများ
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အားနည်းခြင်း သို့မောပန်းခြင်း
မိန်းမကိုယ်အားနည်းခြင်း သို့ အဖြူဆင်းခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Carbamazepine (lamotrigineရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျော့စေပြိး မူးဝေခြင်း၊ နှစ်ထပ်မြင်ခြင်း၊ အမြင်ဝါးခြင်း၊ ဆက်စပ်နိုင်စွမ်းမဲ့ခြင်းစတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုဆိုးစေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။)
Valproate ((e.g., valproic acid, divalproex sodium) (lamotrigine ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုဆိုးစေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။)
Dofetilide(Dofetilideဆေးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပိုဆိုးသွားနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ )
Atazanavir/ritonavir, estrogens, lopinavir/ritonavir, phenobarbital, phenytoin, primidone, rifampin, or succinimides (e.g., methsuximide) (lamotrigineအကျိုးသက်ရောက်မှုကို နည်းသွားစေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ )
ဟော်မုန်းသန္ဓေတားဆေးများ ( ကိုယ်ဝန်တားဆေး) ( ဆေးနှစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကျသွားနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ )
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Valproic Acidပါဝင်တဲ့ အတက်ရောဂါဆန့်ကျင်ဆေးပေါင်းစု
ပထမပတ်နှင့်ဒုတိယအပတ် – 25 mg နေ့စဉ်
တတိယပတ်နှင့်စတုတ္ထပတ် – 25 mg နေ့စဉ်
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ပမာဏ – 100 to 400 mg/day ( တစ်ကြိမ် သို့ နှစ်ကြိမ်ခွဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။) ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ဆိုရင် 25 to 50 mg/day တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ Valproic Acidနဲ့တွဲပေးမယ်ဆိုရင် ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ပမာဏ-
Lamotrigineအသုံးပြုကုသခြင်းက လတ်တလောအသုံးပြုထားတဲ့ဆေးတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်၂နှစ်မှ၁၂နှစ်အထိ- ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပေးနိုင်သောပုံစံ ( ဆေးပြားတစ်ပြားလုံးကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ) ၂နှစ်မှ၆နှစ်အထိ ရောဂါထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ပမာဏကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးပေးပြီးရပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
30 kgထက်ကိုယ်အလေးချိန်နည်းတဲ့လူတွေမှာ 30 kgအထက်ကိုယ်အလေးချိန်ရှိတဲ့လူတွေထက် 50%တိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။
Lamotrigine (လာမိုထရိုင်ဂျင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးပြား၊ သောက်ဆေး 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg.